Sharciyadda dhalaanka keli socodka ah oo isbadallo ku yimid yurub - iftineducation.com
Sharciyadda dhalaanka keli socodka ah oo isbadallo ku yimid yurub
aadan21 / October 23, 2016
iftineducation.com – Isbadallo xagga sharciga oo la xirriira dhalaanka keli socodka ah , ayaa suuragal ka dhigaya in dalalkoodii dib loogu celinayo marka ay gaaraan da’da qaan gaarka ee 18 -ka sanno.
Laanta socdaalka ayaa isbadallo ku sameeyey sharci horey u yaalay oo dhigayey in dhalaanka aan qaan gaarin ee kali socodka ah aan dib loogu celin karin dalalkii ay ka soo hayaameen.
Isbadalkan cusub ayaa wuxuu noqonaya mid dhalaankaasi keenaya in lala sugo inta uu ka gaarayo da’da qaan gaarka.
Maxamed Nabvi oo ah wiil u dhashay dalka Afgaanistaan, ayaa ka mid ah dhalinyaradda dhawaan laga musaafurinayo dalkaan iswiidhan,,isagoo waramayey idaacadda raadiyo Iswiidhan ayuu sheegay in laanta socdaalka go’aan diimo ah ay siisay, islamarkaasina ay dhowreyso inta uu ka qaan gaarayo, markaana dib ugu celineeyso dalkiisi hooyo ee Afgaanistaan. Maxamed ayaa sanadkan helay jawaab diidmo ah waxaana uu noqonayaa toddobaadkan wiil qaangaaray oo da’diisu noqoneysa 18 jir.
Waxaa horey u jiray sharci qeexayey in dhalinyaradda iyo dhalaanka keli socodka ah ee da’doodu ka hooseeyso 18 sanno, aan dib loogu celin karin goobo aaneey jirin cid qaabisha kana kafaallo qaadi karta amaankooda iyo noloshooda, hadase isbadalkan ayaa saameyn doono dhalinyarro badan oo kumanaan gaaraya kuwaas oo u badan Afgaanistaan qorshuhu yahay in dib loogu celiyo dalkoodii labadda sanno ee soo socota.
Kjell-Terje Torvik, oo ah qabiir u qaabilsan laanta socodaalka dadka la celiyo, ayaa dhinaciisa waxa uu sheegay in sharcigii horey u jiray dhigayey in dhalaanka keli socodka ah ee aannu suuragal aheyn in dib loo celiyo la siinayey sharci ku jooga dalka, hadase isbadalka cusub ee bishii luulyo ee sanadkan soo baxay tilmaamayo in dhalaanka keli socodka ee loo arko innaaney xaq u laheyn qaabilaada magangalyo doonimo la siiyo sharci ku meel gaar ah, balse lagala noqonayo ay qaan gaaraan, dalkana laga musaafurinayo.
Ugu dameyntiina Maxamed Nabvi waxaa uu ku sugan yahay xaalad isla hadal ah tan iyo markii la siiyey go’aanka diidmadda ah dibana lagana musuufurinayo Isiiwdhan. Sidoo kale waxaa uu ka mid yahay sunniyiinta tiradda yar ee la ugaarsado sida uu dhigayo warbixin laga soo xigtay laanta qaxootiga u qaabilsan Qarammadda Midoobay. Waa wiil ku dhashay dalka Iran isagoo magangalyo doon ahna bartanka kaga soo dhacay dalkaan Iswiidhan. Ma jirto ehelo iyo cid qaabisho marka dib loogu celiyo Afgaanistaan, wuxuuna qarka u saaran yahay in la dilo.
Amal Aden oo markale dib u bilowday magac xumeeynta dumarka soomaalida Noorweey
Dagaalka Moosil: Ciidamada Mareykanka ayaa ka digay qiiq sun ah